NY VALINY NY MPISOLOVAVA AN-TSERASERA
Ny mponina amin’ny tanàna kely no tsy omena ny fahafahana mifidy ny mpisolovava
Na izany aza, noho ny fahatongavan’ny ny toerana ho an’ny mponina ao amin’ny firenena ankehitriny dia misy ny torohevitra araka ny lalàna an-tserasera manodidina ny famantaranandro ao ny tena aina sy ny toe-piainana tsara.
Online ara-dalàna ny toro-hevitra: asa ny lalàna, ny fianakaviana ny lalàna, ny trano fonenana, ny olana
Ny lalàna be fanangonana ny lalàna, fandrarana, ny fady, ny fahazoan-dàlana.
izay amin’ny toe-javatra sasany dia mety ho azo adika amin’ny fomba samy hafa
Amin’ny lafiny iray izany dia tsara noho ny fananana, ohatra, ny torohevitra araka ny lalàna eo amin’ny trano ny resaka an-tserasera, ianao ho afaka hiaro ny tombontsoan’ny ao amin’ny fizarana ny trano na ny fialan-tsasatra an-trano.
Fa amin’ny lafiny iray hafa, ireo izay nahay ara-dalàna saro dia tsy mbola ratsy kokoa noho ianao (ny mpahay lalàna) mety tsy maneho ny toe-draharaha ao amin’ny famindram-po.
Iza no handresy
Mba ny marina foana eo amin’ny lafiny, aza atao an-tsirambina ny fahafahana mandray ny mahay manampy ny mpisolovava torohevitra, fanohanana, fanampiana amin’ny fanangonana antontan-taratasy sy ny sisa. Koa, izany dia azo jerena ny torohevitra araka ny lalàna an-tserasera manodidina ny famantaranandro, ary dia tena maimaim-poana.
Mandehana fotsiny ao amin’ny tranonkala, ary fenoy avy ny endriky
MANODIDINA NY FAMANTARANANDRO FANAMPIANA NY MPISOLOVAVA